China Factory Tin Fodya Bhokisi, China China Factory Tin Fodya Bhokisi Vagadziri, Vatengesi, Fekitori - G STAR KUTENGA LIMITED
Tin Can Mabhokisi
Zvizorwa pasuru gaba anogona
Mutambo pasuru gaba rinogona
Chikafu pasuru gaba rinogona
Mhuri pasuru gaba rinogona
Tin Inogona Kugadzira Machine
Standard uye Maitiro
Tin Inogona Kugadzira
Tin Containers uye Tin Can Machines Kugadzira kubvira 2010
Imba>Tin Can Mabhokisi>Chikafu pasuru gaba rinogona
China Factory Tin Tobacco Box
Model Number: TB0102
advertising: SGS, Intertek
Minimum Order Yakawanda: 5000PCS
Nguva Yokutora: Nguva dzakakomberedza 30days
Mitemo Yekubhadhara: NaT / T, 30% dhipoziti, bhalansi isati yatumirwa
Kupa Mikana: 500000000 pamwedzi
Kubvunzurudza Zvino →
This tin cigarette box meets international food safety requirements, can directly contact food, and can pass various food safety tests. All our products have passed SGS, Intertek and other third-party inspections many times and meet the requirements of safe food.
Kudhinda pane iyi tini kudhinda kweoffset. Iko kudhinda kwekunze kunogona kudhindwa mune mana mavara (CMYK) kana pantone mavara zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi, yekumhanyisa varnish kana matte mafuta. Uye mukati metini munogona kupfeka mafuta ari pachena nemafuta egoridhe. Inogona zvakare kuve yakapetwa-mativi kudhinda zvinoenderana nevatengi .Mhando dzese dzemhando yepamusoro dzinodikanwa kuti dhindwe.
Maitiro ekudhinda uye dhizaini anogona kuchinjwa. Iyo yepazasi inogona kuve yekudhinda mirairo uye bar kodhi. Iyo yakavharwa netini inogona kugadzirwa neyeakasiyana akasiyana, uye akasiyana mhedzisiro senge rakavhurika hwindo revharo yetini. Tinogona zvakare kuita laser uye inlay Yakakosha mhedzisiro senge kuchera, nezvimwewo, tinogamuchirwa kubvunza!
Product Name China Factory Tin Tobacco Box
zvinhu 230mircon kana yakagadzirirwa ukobvu tinplate
zera 90 * 50 * 122 (H) MM
Kudhinda / Logo tsika
kuvaka chivharo + muviri + pasi
Mharidzo / Mould Lead nguva anenge 15days ekudzima muforoma; anenge 20-25days itsva muforoma (pashure agamuchira muripo uye mifananidzo yacho yasimbiswa)
Delivery Time anenge 30-35days mushure mekubvumidzwa kwemuenzaniso
Payment Term NaT / T, 30% dhipoziti, bhalansi isati yatumirwa
Use to pack cigarettes and tabocco.
1. Zvese zvinhu zvekudhinda inki yemabhokisi etini / tini, kusanganisira kugadzirwa, kurongedza uye kuchengetedza, zvinosangana nezvinodiwa zvekuchengetedza chikafu.
2. Inopfuura gumi yakazara-otomatiki yekugadzira mitsara yemabhokisi etini / tini magaba, OEM mashandiro nema manipulators, yakagadzikana mhando uye yakavimbiswa dhirivhari.
3. Mabhokisi etini nemakani emarata akarongedzwa mumusangano isina guruva, nemhando dzakasiyana dzehunyanzvi hwekuyedza chigadzirwa.
4. Tine makore mazhinji eruzivo rwekunze mabhokisi etini. Zvigadzirwa zveTinplate senge dzakasiyana siyana magaba echikafu, mabhokisi ezvipo, nezvimwewo vari kutengesa zvakanaka muEurope, America nedzimwe nyika.
5. Isu tine inokurumidza sampling, kukwikwidza mitengo, mhando yepamusoro, uye nyanzvi yemhando manejimendi timu.
6. Zvinopfuura chiuru seti yetini bhokisi uye tini dzinogona kuumbwa kusangana nezvigadzirwa zvevatengi zvetini bhokisi kurongedza.
7. Kune gumi mainjiniya mainjiniya patini yekugadzira, ayo anonyatso kusangana nezvinodiwa nevatengi pakugadzira tini magaba
Kwete 322, Yinqiao Road, Shaoxing, Zhejiang, China
Copyright © 2021 G STAR ZVOKUTENGA ZVAKAITWA